PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-07 - Yinqwaba efa ngodlame eSouth Sudan
Yinqwaba efa ngodlame eSouth Sudan
Isolezwe ngeSonto - 2017-05-07 - EZOMHLABA -
ukuthi bayocasha ezintabeni.
“Abantu baseSouth Sudan banothando olukhulu ngezwe labo futhi bayakwazi ukubekezela. Emuva kwempi esidonse kusukela ngo-2011 basakuthanda ukuhlala ezweni labo.
“Ngebhadi impi ibasusa emakhaya bahambe bayohlala ezintabeni ukuze baphephe kubashokobezi.
“Ziningi izingqinamba eziza nokusuka ekhaya njengoba beshiya amasimu abo okusho ukuthi bayalamba kanti amantombazanyana amancane aphoqwa ukuthi ashade ukuze aphephe,” kusho uWhitaker.
Lo mlingisi wodumo lweThe Last King of Scotland lapho ayelingisa khona indawo kandlovukayiphikiswa wase-Uganda u-Idi Amin, uthe bahlangabezana nezingqinamba uma behambisa usizo kubantu baseSouth Sudan.
“Bangu-50 000 abantu asebefile ngenxa yodlame lwase-South Sudan.
“Bangu-80 abasiza umphakathi ababulewe. Uma sihambisa usizo sihlangabezana nezinkinga ngoba kufanele sibheke imigwaqo ephephile lapho engenabo abashokobezi.
“Uma sihamba kwenabashokobezi abasebenzi bethu bayabulawa noma bahlukunyezwe yize besuke behambisa usizo kubantu abaxoshwe yizimpi emakhaya,” kusho uWhitaker.
Uthe banenkinga yokuthi kweminye imigwaqo akuhambeli ngenxa yokuthi ayakhiwe, ezinye izindawo azinawo ugesi kanti abantu abadinga usizo kufanele babe nogesi ne-internet ukuze bakwazi ukuxhumana nezihlobo zabo.
“U-70% wabantu baseSouth Sudan yintsha yingakho siye khona ukuthuthukisa intsha ngolwazi siphinde siyinike namakhono azoyithuthukisa,” kusho uWhitaker.
Yize kunezinkinga zodlame e-South Sudan uthe unethemba lokuthi udlame luzophela e-Afrika futhi ubona intuthuko yomnotho izoba kuleli zwekazi eminyakeni ezayo ngenxa yokuthi intsha eningi itholakala kulo.